समर्थकबिना मेस्सीलाई कठीन
नेपाल लाइभ बुधबार, पुस ८, २०७७, ०६:५२
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले मैदानमा समर्थकबिना खेल खेलिरहनु पर्दा कठीन अवस्था आइपरेको बताएका छन्। दर्शक बिना खेल भएको मैदान अभ्यास गरिरहेको जस्तो मात्र लाग्ने उनले बताएका हुन्।
गएको सिजन ला लिगामा सर्वाधिक गोल गर्दै जितेको पिचिचि ट्रफी दिने कार्यक्रमपछि मेस्सीले पछिल्ला अवस्थाबारे खुलेर बोलेका हुन्। उनले आफ्नो ध्यान सर्वाधिक गोल गरेर अर्को व्यक्तिगत ट्रफी जित्नेमा भन्दा टिमको जितमा केन्द्रित रहेको पनि बताए। उनले गएको सिजन ला लिगामा २५ गोल २२ असिस्ट गरेका थिए।
यो सिजनको खेल सकिएपछि मेस्सीले बार्सिलोना छाड्छन् भन्ने अनुमान भइरहेका छन्। गएको ट्रान्सफर समयमा जस्तै इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले मेस्सी किन्ने इच्छा देखाइरहेको छ। त्यसका साथै फ्रेन्च क्लब पिएसजी पनि मेस्सीलाई लैजान सक्ने क्लबका रुपमा हेरिरहेको छ। नेमारले मेस्सीसँगै खेल्ने इच्छा सार्वजनिक रुपमा बताइरहँदा उनी पिएसजी जाने विषयमा बल पुगेको देखिन्छ।
यसअघि बार्सिलोना अध्यक्षमा जोसेप मारिया बर्टामेउ रहँदा मेस्सीको महँगो रिलिज क्लजका कारण म्यानचेस्टर सिटीले उनलाई लैजान सकेको थिएन। सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्न पाउने विषय आफ्नो सम्झौतामा रहेको मेस्सीले बताइरहे पनि ७०० मिलियन युरोको रिलिज क्लजलाई बाधा बनाएर उनलाई रोकिएको थियो। जसले आफ्नो प्रिय क्लबविरुद्ध कानूनी लडाइँमा नजाने भन्दै मेस्सी बार्सिलोनामा रहन राजी भएका थिए।
त्यसबेला लामो समयपछि सार्वजनिक रुपमा बोलेका मेस्सीले क्लब अध्यक्ष बर्टामेउको खुलेर आलोचना गरेका थिए। जसका कारण बर्टामेउ हटाउन अन्य पदाधिकारी लागिपरे र उनको राजीनामाका लागि बाध्य बनाए। अब बार्सिलोना ब्यवस्थापनको नयाँ चुनावले मेस्सीको भविष्य कता जान्छ भन्ने निक्योल हुने फुटबल विश्लेषकहरु बताइरहेका छन्।
यो सिजन पहिले जस्तो गोलमा बढ्ने संख्यामा मेस्सी पछाडि परिरहेका देखिन्छन्। आफूलाई गएको ट्रान्सफर समयको विषयले असर नगरेको बताइरहे पनि उनी खुलेर पहिलेको अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन्। यो सिजन मेस्सीले बार्सिलोनाको १८ खेलमा १० गोल र ५ असिस्ट गरेका छन्।
मंगलबार राति लिगमा भायाडोलिडसँगको खेलमा गोल गर्दै मेस्सी एकै क्लबबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन्। उनले बार्सिलोनाबाट ६४४ गोल गरेका छन्। यसअघिसम्म एउटै क्लबबाट सर्वाधिक गोलकर्तामा पेले थिए। पेलेले १९५६ देखि १९७४ सम्म सान्तोषबाट १९ सिजन खेल्दै ६४३ गोल गरेका थिए।
गएको सिजनको अन्त्यमा बार्सिलोना छाड्ने प्रयास असफल भएपछि आफूलाई यो सिजनको सुरुवातको केही समय मुस्किल भए पनि अहिले जितमा मेहनत गरिरहेको उनले बताएका छन्। स्पेनिस पत्रिका मार्काले मेस्सीसँग गरेको केही प्रश्नोत्तर यस्तो छ-
सात पटक पिचिचि ट्रफी जित्नु गजव होइन त?
सत्य कुरा के हो भने मैले यतिका अवार्ड जित्छु भन्ने सोचेकै थिइनँ। टेल्मो जाराको कीर्तिमान तोडेर अगाडि बढ्ने मेरो सोचमा कहिल्यै आएको होइन। अहिले यो जितले रमाइलो अनुभव भइरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा पिचिचि जित्दाको भन्दा तपाइँको गोल संख्या कम देखिएको छ, आठौँ ट्रफीका बारेमा सोच्नुभएको छ?
मलाई थाहा छैन, मैले वास्तवमा त्यसबारे सोचेको छैन। त्यसले मलाई कुनै चिन्ता महसुस पनि हुँदैन। मेरा लागि फेरि ला लिगा जित्नु महत्वपूर्ण विषय हो, जुन हामीले गएको सिजन जित्न सकेनौँ। यसैले पिचिचिका लागि भन्दा मेरो ध्यान र मेहनत लिग उपाधिमा नै हुनेछ।
यो बार्सिलोनाको खेल च्याम्पियन्स लिग र ला लिगामा धेरै नै फरक देखिएको छ। तपाइँलाई लाग्छ बार्सिलोनाले दुबै उपाधि जित्न सक्छ?
हामी सबै कुरा जित्नका लागि प्रयास गर्नेछौँ। यो क्लबमा सधैँ ध्यान जितमा नै हुँदै आइरहेको छ। हामीले अहिले थोरै थोरै गर्दै सुधारतर्फ बढिरहेका पनि छौँ। ला लिगामा हामीलाई अगाडि बढ्न समय लागिरहेको सत्य हो। हामीले त्यति धेरै अंकहरु गुमाउनु हुँदैन थियो।
मलाई के लाग्छ भने हामीले अलाभेस, गेटाफे र रियल मड्रिडसँग फरक नतिजा निकाल्न सक्थ्यौँ। त्यो तीन खेलमा हामीले गोलका धेरै अवसर बनाएका थियौँ। जहाँ त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको भए अवस्था अहिले फरक हुने थियो।
ला लिगामा सही रुपमा बढ्न त्यस्तो कुनै योजनाहरु छ?
अहिले महत्वपूर्ण कुरा के भने लिग तालिकामा राम्रो स्थानमा रहनका लागि जितको अवसरहरुलाई उही रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ। यसमा केही समय लाग्न सक्छ। अहिले कोरोना माहामारीपछिको खेल समयमा फुटबल खेल निकै कठीन भइरहेको छ। फुटबलमा धेरै कुरा फेरिएको छ। यो अप्ठ्यारो सबैका लागि हो, विस्तारै अवस्था फेरिँदै पनि गइरहेको छ।
कोरोनाका कारण गएको नौ महिनादेखि खेलहरु दर्शकबिना खाली रंगशालामा भइरहेका छन्। दर्शकबिना खेल्न कति कठीन छ?
हो, धेरै कठीन छ। दर्शकबिना खेल्नु जटिल विषय हो। त्यसमा राम्रो सोच आउन सक्दैन। स्टेडियममा कोही नदेख्नु अभ्यासको मैदानमा अभ्यास गरिरहे जस्तो लाग्छ। त्यसैले खेलमा ध्यान दिन पनि केही समय लाग्ने गर्छ। त्यसैले अहिले कतिपय खेलहरु फरक लागिरहेको हुन्छ। तपाइँ जोविरुद्ध खेलिरहनुभएको भए पनि जित कठीन बनिरहेको छ।
कोरोना माहामारीका कारण फुटबलमा धेरै कुरा फेरिन बाध्य भयो। त्यो फेरिएका कुराहरुले राम्रो प्रभाव पारेको देखिँदैन, त्यो कुरा खेलमा हामीले अनुभव गरेका छौँ, देखिरहेका छौँ। आश गरौँ अब छिट्टै दर्शकहरु मैदानसम्म आउन पाउनेछन् र सबै कुरा सामान्य हुनेछ।
म्याराडोनालाई श्रद्धाञ्जली दिएको समय तपाइँको गोल उत्कृष्ट रह्यो,
त्यो दिन धेरै नै विशेष रह्यो। मैले सोचेअनुसार र तयारी गरेअनुसार नै मैदानबाट म्याराडोनालाई श्रद्धाञ्जली दिन पाएँ। म्याराडोना हामीसँग छैनन् भनेर त्यसरी सम्झन पाउने अवसर राम्रो मिलेको हो।